Maitiro Ekuronga Yako Webhu Saiti | Martech Zone
Chitatu, Kurume 5, 2014 Chitatu, Kurume 5, 2014 Douglas Karr
Tese tanga tiripo… yako saiti inoda zororo. Pamwe bhizinesi rako rakadzokororwazve, saiti yacho yave kusakara uye yekare, kana kuti haisi kungoshandura vashanyi nenzira iwe yaunoda nayo. Vatengi vedu vanouya kwatiri kuti vawedzere shanduko uye isu tinowanzo fanirwa kutora nhanho kumashure uye kugadzirisa zvakare avo ese ewebhu presence kubva kumakiresi kusvika kune zvemukati. Tinoita sei?
Webhu saiti yakaputsika kuita matanhatu akakosha marongero, ayo anofanirwa kujekeswa kuitira kuti uzive kwauri kubva uye kuti zvinangwa zvako ndezvipi:
chikwiriro - ndeapi matekinoroji anoshandiswa, kubata, mapuratifomu, nezvimwe.
Vatungamiriri - marongero ako saiti.
gutsikana - ndeupi ruzivo runoda kuratidzwa uye sei.
Users - ndiani anowana saiti uye sei.
Features - ndezvipi zvinhu zvinodiwa kuti uchinje vatengi zvakanaka.
Chiyero - urikuyera sei kubudirira kwako kana nzvimbo dzekuvandudza.
Ikozvino kune zviyero zvakasiyana kune saiti uye nemabatiro avakaita pamwe nemaitiro ako ekushambadzira edigital. Saiti nyowani inosangana sei nemaitiro aya:
muchiso - kutaridzika, kunzwa, mavara, mafonti, dhizaini, mazwi, nezvimwewo zvinotsanangura saiti.
Kudana kuKuita - ndedzipi nzira dzekutendeuka uye vanhu vanosvika sei ikoko?
Mapeji ekutumira - vanhu vachatendeuka kupi uye chii chakakosha kukosha kweshanduko iyoyo? Iko kune CRM kana Kushambadzira kweMagetsi kusangana kunodiwa?
gutsikana - ruzivo rwebhurocha, ruzivo rwekambani, vashandi, mapikicha, mharidzo, infographics, zvichena, zvinoburitswa, zvikumbiro zvedemo, zviitiko zvevashandisi, kurodha pasi, webinar, mavhidhiyo, nezvimwe.
enamel - vanhu vanonyorera kupi, urikugona sei kunyorera uye nemitemo yeSAMP.
kutsvaka - chikuva, kutsvagisa kwemazwi makuru, kuvaka peji, kurudziro yezvinyorwa, nezvimwe.
Social - snippets, kugovana mabhatani uye zvinongedzo kune zvehukama kuvapo zvinofanirwa kuve zvakasanganiswa nekusimudzirwa pasiti yese
CHERECHEDZA: Nekuvandudza kubatana, shandisa mutengi wedu yekushandisa pfungwa kugadzira mepu nekushandura hutongi nemaitiro ekuchengetedza zvakapusa uye kuronga zvese zviitiko mukati me 2-3 mabhatani ekupinda saiti.
Pakati peimwe yeaya marongero, ndeapi ruzivo
Chii chiri saiti parizvino chinoita iwe chaunoda iwe ramba uchiita?
Chii chiripo saiti yazvino isingaite iyo saiti nyowani ndinofanira kuita?
Chii chazvino saiti isingaite izvo zvingave zvakanaka kuita pane ino saiti nyowani?
Neimwe yeaya marongero, tanga nyaya dzemushandisi kune yega yega yevashandisi uye nemabatiro avanoita nzvimbo iyi. Vaputse kuita zvavanofanira kuita uye zvakanaka kuita. Nyaya yemushandisi ndeye rondedzero yakapfuma yekuti mushandisi anopindirana sei uye inogona kushandiswa pakuedzwa kwekubvuma. Heino muenzaniso:
Mushandisi anokwanisa kusaina nezita rekushandisa uye password, kunyoresa saiti, uye kutora password yavo kana isingazivikanwe. Kunyoresa kunoda zita rekushandisa, zita rizere, kero yeemail uye password yakasimba (kusanganiswa kwediki kesi, yepamusoro kesi, nhamba uye zviratidzo). Email yekusimbisa inofanirwa kuverengerwa kuve nechokwadi chechokwadi email kero inoshandiswa. Mushandisi anofanira kukwanisa kugadzirisa password yavo chero nguva pasina rutsigiro.
Iye zvino tava kupinda mune nitty gritty ... iwe une ruzivo rwesaiti yako, mashandisiro anoita vashandisi nayo, pamwe nezvinodiwa zvesaiti nyowani uye izvo zvaunoda. Iterative kuvandudza kwakakosha - isa pamberi maficha uye mushandisi nyaya kuti iwe uzive izvo zvinofanirwa kutanga zvaitwa kuburikidza nezvakanaka kuve nazvo. Kutanga kufunga nezvezvinangwa uye zviwanikwa zvekumisidzira zvinotarisirwa pane zvaunoda uye kana paunenge uchizvida nazvo.
Inventory iyo saiti yemapeji. Kazhinji, isu tinoshandisa chinokwenenzvera kurerutsa izvi.
Nerimwe nerimwe remapeji, tsanangura kuti nderipi peji template zvichazodiwa kuratidza zvakanaka peji racho.
Ita waya kuona marongero epage uye kufamba.
Kana kuverenga peji kuchaderedzwa (kazhinji kunokurudzirwa), uchavepi redirect aripo mapeji kuitira kuti usakanganisa vashandisi nekutsvaga? Mepu mapeji ese aripo nenzvimbo nyowani.
Gadzira zvemukati migration ronga kutora mapeji ese aripo muzvikamu zvitsva zvemapeji kuburikidza neCMS nyowani. Izvi zvinogona kuita zvechisimba… zvinoda kuti mudzidzi akope uye anamate. Kana inogona kuve yakaoma dhatabhesi shanduko yakanyorwa kupinza iyo ruzivo.
Gadzira matrix e vanozvishandisa, madhipatimendi, kuwana uye mvumo nepeji uye maitiro. Paradzanisa nechido chekuva nacho uye zvakanaka kuva nazvo.
Vaka chirongwa chako
Chinhu chega chega chekuita chinofanira kuve ne (ndiani ane chekuita), chii (chiri kuitwa zvakadzama), sei (sarudzo), riini (rinofungidzirwa zuva rekupedzisa), kutsamira (kana rimwe basa richifanirwa kuitwa pakutanga), uye pekutanga (zvakanaka kuva nazvo , unoda kuva).
Zivisa vashandisi uye tora chibvumirano chavo pamabasa uye nguva.
Iva anochinjika neyechipiri zviwanikwa, workaround, uye kugadzirisa zvekare.
Iva nepakati weprojeki maneja anoteedzera, kugadzirisa uye nekuzivisa zuva nezuva.
Vaka mabhauda pakati pevanoongorora vatengi uye mazuva ako ekupedza uine yakawanda nguva yekugadzirisa kana kugadzirisa. Kana maficha nyowani (chiyero chinokambaira) chikaunzwa, ita shuwa kuti mutengi anoziva kuti nguva dzinogona kukanganiswa sei uye ndeapi mamwe mari angangowanikwa.
Ratidzira nemutengi munzvimbo yekuratidzira uye famba nepakati nyaya dzemushandisi kugamuchirwa.
Gadzira analytics munzvimbo yese saiti yekutevera zviitiko, mushandirapamwe manejimendi uye chiyero chekushandura.
Paunenge wagamuchirwa, isa saiti irarame, redirect old traffic kune nyowani. Nyoresa saiti iyi neWebmasters.
Tora chinyorwa chematanho uye analytics. Wedzera chinyorwa muAnalytics zuva iro saiti yacho yagadziriswa.
Ita chirongwa chako! Kana iyo saiti yagadzirira
negadziriro yeparutivi saiti yazvino, dhatabhesi uye chero zvinhu zvinodiwa.
Sarudza a contingency plan nekuti kana zvinhu zvikashata (uye vachadaro).
urongwa iyo 'enda kurarama' zuva / nguva yeiyo saiti uko vashandisi vasina kunyanya kukanganiswa.
Iva nechokwadi chekuti vashandi vanokosha kuziviswa kana paine hwindo uko saiti inogona kunge isingawanikwe - kusanganisira vatengi.
Iva chirongwa chekutaurirana munzvimbo yekuona kuti munhu wese anowanikwa nefoni kana kutaura.
Isa saiti nyowani kurarama.
bvunzo nyaya dzemushandisi zvakare.
Kuvhura saiti hakusi iko kumagumo. Iye zvino unofanirwa kuongorora chinzvimbo, varidzi vewebhu uye analytics kuona kuti saiti iri kuita sezvawakanga waronga. Mhan'ara vhiki mbiri dzese kwemasvondo matanhatu kusvika masere nekufambira mberi. Ita zvirongwa uye uvandudze mapurojekiti zvinoenderana. Rombo rakanaka!
Tags: negadziriro yeparutivichirongwa chekutauriranamigrationkuronga nzvimbo nyowaniurongwakurongasaiti yekuchengetedzasaiti kutamanyaya dzemushandisiweb Designwebhu dhizaini dhizainiwireframe
Varume vs. Vakadzi Kutenga Pamhepo
Mar 12, 2014 pa 7: 21 AM
Kuparara kukuru kwekuronga saiti kunze! Imwe neimwe yeidzi nharaunda zvirokwazvo inobvumira kurukurirano yokuwedzera.
Izvi zvingava zvakanaka kune dzakatevedzana….serious!
Mar 12, 2014 pa 2: 48 PM
Ngatizviite! Zvichida infographic uye whitepaper yakanyorwa pamwe chete?